Mas’uuliyiin masjidka Is-bahaysiga shacab kula tukadey salaadii ciida Carrafo. – Radio Daljir
Mas’uuliyiin masjidka Is-bahaysiga shacab kula tukadey salaadii ciida Carrafo.
Seteembar 12, 2016 2:22 b 0
Muqdisho, Sep 12 2016—Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo mas’uuliyiin kale ayaa boqolaal kamid ah dadweynaha Muqdisho kala qeybgalay dukashada salaa dda ciidul Adxa oo lagu qabtay Masjidka weyn ee isbaheysiga Islaamka ee magaalada Muqdisho.
Dukashada salaaddaccidul Adxa waxaa sidoo kale ka soo qeybgalay guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya, mudane Maxamed Sheekh Cismaan ( Jawaari), xubno ka tirsan labada gole ee dowladda iyo qaar kamid ah madaxweyniyaasha maamulada dalka.
Madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo salaada ka dib khudbad dheer ka jeediyay Masjidka ayaa waxaa uu ka hadlay arimo badan oo xaaladda dalka la xiriira gaar ahaan dhanka amniga, siyaasadda iyo arimaha bulshada.
Mudane Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dalka ayaa guud ahaan umadda Soomaaliyeed waxaa uu ugu hambalyeeyay munaasabadda ciidul Adxa, isagoona sheegay in loo baahan yahay in qofkasta uu ka qeyb qaato dhismaha dowladnimada dalka.
Madaxweynaha ayaa mar kale ku celiyay baaq uu u jeediyay dhalinyarada ay marin abaabiyeen ururka Al-shabaab, waxaana uu ugu yeeray in ay u soo laabtaan dadkooda isla markaana ka tanaasulaan fikirka munxarifka ah ee ku dhisan baabi’inta shacabka Soomaaliyeed.
Ugu dambeyntii Madaxweynaha dalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa uu ka dalbaday dadka xumaha wada in ay ka waantoobaan falalalka guracan , isagoo xusay in loo baahan yahay in qofka aan wax wanaagsan umadda u sheegeynin in uu iska aamuso.
DHEGEYSO-Madasha Maamuus oo soobandhigtay agoonta ay ciidsiiyeen.
DHEGEYSO-Shirkii madasha wadatashiga qaran oo natiijo la’aan kudhammaaday.